Ixhasa umzi mveliso, abaxhasi - iTshayina ixhasa abavelisi
I-HDG Cast Iron single Pipe roller inkxaso
Njengenye yezona zinto zixhomekeke kukhuphiswano kwinkampani, iHDG yethu yentsimbi yentsimbi yentsimbi yokuxhasa enye yenzelwe ukumisa umbhobho apho intshukumo yexesha elide kunye nohlengahlengiso nkqo luyafuneka. Kwaye bafumene udumo olukhulu kwihlabathi liphela, ngakumbi eMntla Melika, eMzantsi Melika, kuMbindi Mpuma naseAsia. Kwakhona, kukho unyango umphezulu ezahlukeneyo ukhetho lwakho: Plain, Hot nkxu Isefu, epoxy kunye Green entanjeni kwalenza, ukuhlangabezana neemfuno zakho anticorrosion amanqanaba ahlukeneyo.
I-HDG Cast Iron Pipe Roller Yima
Njengenye yeendawo zokubeka izinto ezinokhuphiswano kwinkampani, i-HDG yethu yentsimbi yombhobho yentsimbi eyenzelwe ukuba yenzelwe ukumisa imibhobho apho intshukumo yexesha elide kunye nohlengahlengiso oluthe nkqo luyafuneka. Kwaye bafumene udumo olukhulu kwihlabathi liphela, ngakumbi eMntla Melika, eMzantsi Melika, kuMbindi Mpuma naseAsia. Kwakhona, kukho unyango umphezulu ezahlukeneyo ukhetho lwakho: Plain, Hot nkxu Isefu, epoxy kunye Green entanjeni kwalenza, ukuhlangabezana neemfuno zakho anticorrosion amanqanaba ahlukeneyo.
Ukulayisha okuphezulu okuthwala iRubber Inkxaso Faka
Njengomnye weendawo ezixhomisa amehlo kukhuphiswano lwenkampani, ukufaka kwethu umthwalo omkhulu wokuthwala ukuxhoma irabha kuyasetyenziswa kwiindawo ezixhasayo zemibhobho egqunyiweyo ukunqanda ukutyunyuzwa kobushushu. Kwaye bafumana udumo olukhulu kwihlabathi liphela, ngakumbi kuMbindi Mpuma naseAsia. Kwakhona, i-13mm, i-19mm, i-25mm, kunye ne-50mm ubukhulu ziyafumaneka.
Ukhuselo lokuKhusela i-Shield
Njengomnye weendawo zokubeka ukhuphiswano kwinkampani, ukhuselo lwethu lokhuselo lokhuselo luyasetyenziswa phakathi kwendawo yokuhlala kunye nemibhobho egqunyiweyo ukunqanda ukutyunyuzwa kobushushu. Kwaye bafumana udumo olukhulu kwihlabathi liphela, ngakumbi eMntla Melika.
Inkxaso yesihlalo nge-U-bolt
Njengenye yezona zinto zixhomekeke kukhuphiswano kwinkampani, inkxaso yethu yesali kunye ne-U-bolt yinkxaso echwetheziweyo apho kungafuneki uhlengahlengiso nkqo. Kwaye ifumene ukuthandwa kakhulu kwihlabathi liphela, ngakumbi eMntla Melika, eMzantsi Melika, kuMbindi Mpuma naseAsia. Ngaphandle koko, i-U-bolt inokubonelela ngozinzo olongezelelekileyo.
Pipe Adjustable Inkxaso
Njengomnye weendawo zokubeka izinto ezinokhuphiswano kwinkampani, inkxaso yethu yombhobho ehlengahlengisiweyo ngumbhobho we-NPT welding kumbhobho wesali ngombhobho wokutshixa wombhobho we-NPT ovumela uhlengahlengiso nkqo kumbhobho wesitokhwe. Kwaye ifumene ukuthandwa kakhulu kwihlabathi liphela, ngakumbi eMntla Melika, eMzantsi Melika, kuMbindi Mpuma naseAsia. Kwakhona, kukho unyango umphezulu ezahlukeneyo ukhetho lwakho: Pre-iqaqanjiswa, Zinc ngumfanekiswana, epoxy kunye Gqibezela Green kwalenza ukuhlangabezana neemfuno zakho anticorrosion amanqanaba ahlukeneyo.
Assembly Adjustable Pipe inkxaso
Njengomnye weendawo zokubeka izinto ezinokhuphiswano kwinkampani, ibandla lethu elinombane elixhasayo lenzelwe ukuxhasa umbhobho othe tyaba ukusuka kwizikhundla apho kulungiswa khona nkqo. Kwaye ifumene ukuthandwa kakhulu kwihlabathi liphela, ngakumbi eMntla Melika, eMzantsi Melika, kuMbindi Mpuma naseAsia. Kwakhona, kukho unyango umphezulu ezahlukeneyo ukhetho lwakho: Pre-iqaqanjiswa, Zinc ngumfanekiswana, epoxy kunye Gqibezela Green kwalenza ukuhlangabezana neemfuno zakho anticorrosion amanqanaba ahlukeneyo.
HDG Adjustable Cast Iron mqengqeleki kwendawo yokuhlala
Njengenye yezona zinto zixhomekeke kukhuphiswano kwinkampani, iihanger zethu ezijingayo zentsimbi ezijingayo zenzelwe ukumisa imibhobho apho intshukumo yexesha elide kunye nohlengahlengiso oluthe nkqo luyafuneka. Kwaye bafumene udumo olukhulu kwihlabathi liphela, ngakumbi eMntla Melika, eMzantsi Melika, kuMbindi Mpuma naseAsia. Kwakhona, kukho unyango umphezulu ezahlukeneyo ukhetho lwakho: Zinc-ngumfanekiswana, Hot nkxu Isefu, epoxy kunye Green entanjeni kwalenza, ukuhlangabezana neemfuno zakho anticorrosion amanqanaba ahlukeneyo.
Sihlalo weRoller yentsimbi yeHDG
Njengenye yezona zinto zixhomekeke kukhuphiswano kwinkampani, izitulo zethu zentsimbi zombhobho we-HDG ziyilelwe ukumisa imibhobho apho intshukumo yexesha elide kunye nohlengahlengiso nkqo luyafuneka. Kwaye bafumene udumo olukhulu kwihlabathi liphela, ngakumbi eMntla Melika, eMzantsi Melika, kuMbindi Mpuma naseAsia. Kwakhona, kukho unyango umphezulu ezahlukeneyo ukhetho lwakho: Zinc-ngumfanekiswana, Hot nkxu Isefu, epoxy kunye Green entanjeni kwalenza, ukuhlangabezana neemfuno zakho anticorrosion amanqanaba ahlukeneyo.